Rugby : hohatevenina «expatriés» ny Makis de Madagascar | NewsMada
Rugby : hohatevenina «expatriés» ny Makis de Madagascar
Hiova endrika tanteraka ny Makis de Madagascar, manomboka amin’ity taona 2018 ity. Ho tohin’izay efa natao tamin’ny taon-dasa, hohatevenina mpilalao avy any Eoropa “expatriés”, ny ekipam-pirenena Malagasy.
Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can Silver cup 2018), ny Makis de Madagascar, “senior” lehilahy. Fihaonana, hatao any Zambia ny volana jolay, ho avy izao. Nambaran-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby, fa hohatevenina mpilalao mpila ravinahitra mipetraka any Frantsa “expatriés”, manomboka izao ny Makis de Madagascar. Efa misy enina mirahalahy, vonona hiatrika izany. Misy ireo milalao ao amin’ny “federale 1”, ny hafa indray ao amin’ny Pro D2. Mpilalao ao anaty “pack d’avant” avokoa izy ireo. Tanjon’ny Makis, amin’ity ny hiverina ao anaty (Gold cup). Ankoatra izay, fantatra fa ho vita amin’ny volana ambony ilay ivo toeram-piofanana eny Andohatapenaka, ka hiasa sy hihodina amin’ny faran’ny volana jolay. Hanao fampivondronana ao ny Makis U18 lahy sy vavy, hiatrika ny lalao afrikanina ho an’ny tanora, hatao any Alzeria.
Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena io ivo toeram-piofanana io satria ry zareo Afrikanina Tatsimo, ny hany manana toa azy aty Afrika. Nambaran’ny filohan’ny Malagasy rugby fa ampiarahina amin’ny famaranana ny fiadiana ny amboaran’ny filoha, ny fitokanana izany.
Betafo: nahitana rongony 1 118 fototra 26/10/2020
Amparihy: telo lahy nahatrarana taolam-paty roa gony 26/10/2020
Asan-jiolahy miharo habibiana: raim-pianakavina iray maty, voaolana ny zanany vavy 26/10/2020
“Rond point” Soanierana: mpihazakazaka vao maraina maty voahitsaky ny taxi-be 26/10/2020
Asan-jiolahy ao Toamasina: mampitandrina ary tsy hitsitsy ireo jiolahy ny polisin’ny Fip 26/10/2020